भरतपुर प्रयोगशालामा दिनहुँ स्वाब बढ्दो, स्टक राख्न ठाउँ छैन, ९ सय होल्डमा – Health Post Nepal
भरतपुर प्रयोगशालामा दिनहुँ स्वाब बढ्दो, स्टक राख्न ठाउँ छैन, ९ सय होल्डमा
२०७७ जेठ २९ गते १६:१४
चितवनस्थित भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गर्न बाहिरी जिल्लाबाट स्वाबको नमुना आउन थालेपछि स्टक राख्ने ठाउँसमेत अभाव हुन थालेको छ।
पछिल्लो समयमा कोरोना प्रभावित जिल्लाबाट पिसिआर परीक्षणका लागि दैनिक ३ सयको हाराहारीमा नमुना आउन थालेको छ।
‘हामीकहाँ चितवनसहित सल्यान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धादिङ, हेटौंडा, नवलपरासीबाट पिसिआर परीक्षणका लागि दैनिक तीन सयजति स्वाब आउँछ। यहाँ स्याम्पल राख्ने पर्याप्त फ्रिजसमेत छैनन्,’ भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालाकी डा. नितु अधिकारीले भनिन्, ‘स्टक राख्ने फ्रिज नहुँदा परीक्षण गर्न समस्या भएको छ।’
उक्त प्रयोगशालामा दुईटा मात्र फ्रिज रहेको जनाइएको छ। त्यहाँ आइस बक्ससहित राख्दा जम्मा २ सय ५० को हाराहारीमा स्याम्पल अट्ने गरेको अधिकारीले बताइन्। फ्रिज कम हुँदा अहिले भिटिएम प्लास्टिकमा बेरेर फ्रिजमा राख्ने गरिएको छ। त्यसरी राख्दा ९ सयको हाराहारीमा नमुना स्टक राख्न सकिएको उनले बताइन्। ‘हामीकहाँ अहिले १ हजार हाराहारीमा नमुना स्टकमा छन्। राख्ने ठाउँसमेत छैन,’ डा. अधिकारीले भनिन्, ‘यस विषयमा भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई जानकारी गराउन जाँदैछु।’
पछिल्लो समयमा धमाधम स्वाब आउँदा एक साताभन्दा बढी स्टक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्। ‘हामीले दैनिक २ सयको हाराहारीमा मात्र पिसिआर परीक्षण गर्न सक्छौं। यहाँ त्यसभन्दा बढी नै आउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्याम्पल धेरै समय राख्न पनि मिल्दैन होला। यसको अध्ययन हुन बाँकी नै छ। हामीले एक सातासम्म बढी स्टक रहेका नमुना परीक्षण गर्ने गरेका छैनौं।’
बाहिरी जिल्लाबाट समन्वयबिना पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाबहरू आउने गरेका छन्। त्यस्ता नमुनाहरू पछिल्लो समय प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाइदिने गरेको उनले बताइन्। भरतपुर कोरोना प्रयोगशालाले चितवनको स्वाबलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्ने गरेको छ। जिल्लामा दैनिक ५० को हाराहारीमा स्वाब संकलन हुने गर्छ।
प्रयोगशालामा जनशक्ति कम भएका कारण क्षमताअनुसार परीक्षण हुन सकेको छैन। भरतपुरको प्रयोगशालाको दैनिक ६ सय हाराहारीमा परीक्षण गर्ने क्षमता छ। तर, अहिले दुई सयमात्र परीक्षण हुने गरेको छ।
परीक्षणलाई तीव्र पार्न जनशक्ति थप गर्नुपर्ने उनले बताइन्। तीन सहयोगीसहित १० जनाले मात्र पिसिआर परीक्षण गराउँछन्। अहिले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रयोगशालामा पाँचजना मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट र २ जना माइक्रोबायोलोजिस्ट र एक प्राविधिकले काम गर्दै आएका छन्। जनशक्ति थप गर्ने हो भने तीन सिफ्टमा काम गर्न सकिने डा. अधिकारीले बताइन्।
अहिले प्रयोगशालामा स्टक रहेको किटसमेत सकिँदै गएको छ। ‘अझै १ हजार ४ सय आरएनए र ९ सय पिसिआर रिएजेन्ट किट मात्र बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो किटले एक साता पनि पुग्दैन।’
जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियतामा चैत्र २४ देखि नियमित सेवा सुचारु भएको भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालामा जेठ २९ सम्म ३ हजार ६ सय ४२ वटा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये ४१ स्वाबमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको प्रयोगशालाले जानकारी जनाएको छ।